【 ဆောငျးပါး 】 “facebook ပျေါမှ ငပေါမြား” | Opinion Leaders
ယနခေ့တျေလို မီဒီယာထှနျးကားမှုအားကောငျးသညျ့ ခတျေကာလမှာ facebook ပျေါတကျကာ ကလေးကလားရေးတတျသညျ့ တဈခြိနျက ရာထူးရာခံယူထားခဲ့သူတှေ၏ စာတှကေို မကွာခဏတှမွေ့ငျရသညျ။ဒီလိုတှမွေငျရတော့ တိုငျးပွညျ ဘာကွောငျ့ အဖကျဖကျကနိမျ့ကလြာရသလဲဆိုသညျကို သဘောပေါကျလာမိသညျ။တဈခါတဈလေ တျောတျောယုတျယုတျညံ့ညံ့တှရေေးတာ တှရေ့သညျ့အခါ ဒီလိုလူမြိုးမှဟုတျပါလစေလို့ မသကျမသာဖွဈမိသညျ။ဒီလိုမရငျ့ကကျြတဲ့သူတှေ ဘယျလိုလုပျ ဒီနရောတှကေိုတာဝနျယူခဲ့ပါလိမျ့ဟု တှေးလညျးတှေးမိသညျ။
တဈခါတဈလေ ရေးသူကတော့ ဘယျလိုနမေယျမှနျးမသိ။သူမြား share ရငျး အခနျ့မသငျ့လို့ ကိုယျ့ဆီ ဒီလိုမြိုး status တှေ တှလေ့ာရသညျအခါ ရေးသူကတော့မသိ။တှမွေ့ငျဖတျရှုရသူ ကြှနျတျောတို့အဖို့ သူတို့အစား မကျြနှာပူလှသညျ။
စကားဆိုသညျက ပွောပါမြားလာလြှငျ စကားထဲကနေ ထိုသူ၏အကငျြ့နှငျ့ ဓလဇေ့ရိုကျကို ပွလာသညျ။ငါပွောသမြှအမှနျ ငါပွောသမြှအဟုတျဆိုသညျ့ အတ်တကွီးတာတှေ၊ သဘောထားမပွညျ့တာတှေ၊ သဘောထားသေးသိမျသူတှေ ပျေါလာသညျ။
ကိုယျလိမျပွောတာကို တခွားသူမသိဘူးထငျကာ အတငျးဇှတျယုံအောငျပွောလေ ထိုသူမဟုတျတာ ဘယျလောကျလုပျခဲ့ပွီလဲဆိုတာကို လူတှကေပိုသိလာလဆေိုတာမြိုးတှလေညျး ဖွဈလာတတျသညျ။တဈခါတဈလေ ကိုယျယူထားသညျ့နရောနှငျ့ မတနျစှာပွောသညျ့ တာဝနျမဲ့စကားတှေ၊ ကလေးကလားပုံတှေ မီဒီယာပျေါထှကျလာသညျ့အခါ တျောတျောဦးနှောကျမရှိသညျ့လူတှအေောကျမှာ နခေဲ့ရသညျ့နှဈတှအေတှကျ ပွနျတှေးတိုငျး ဘုရားတမိသညျ။
ဟိုယခငျကတော့ ဘယျလိုတှဖွေဈနသေလဲမသိ။ဒီဘကျခတျေ မီဒီယာတှအေားကောငျးလာသညျ့ ၂၀၀၀ ပွညျ့နှဈနောကျပိုငျးမှာ ဒီလိုပေါတောတောစကားတှေ၊ သမိုငျးဝငျ တာဝနျမဲ့စကားတှေ၊ ဒီလိုလကျလှတျစပယျ တာဝနျမယူသညျ့စကားတှေ ခဏခဏတှလေ့ာရသညျ။
တခြို့က ကိုယျယူထားရသညျ့နရောနှငျ့ မလြျောညီစှာ စကားတဈခှနျးကို တာဝနျမဲ့စှာပွောကွသညျ။ကိုယျပွောသညျ့ စကားတဈခှနျးက ဘယျလောကျထိ တာသှားသညျဆိုတာကိုလညျး မသိကွ။စကားတဈခှနျးနောကျမှာ တာဝနျခံမှု တာဝနျယူမှု ရှိရမညျဆိုတာကို သိပုံမရ။
တခြို့က ငါက ဘာကောငျဖွဈနပွေီဆိုပွီး ငါ့စကားနှားရဆိုသလို ပွောခငျြတာတှေ ပွောကွသလို ပွောပွီး လုပျခငျြမှလညျး လုပျကွသညျ။တခြို့ကတော့ ကလေးမြားသဖှယျ ငါနိုငျလြှငျပွီးရော အဓိပ်ပါယျမရှိတာတှေ နရောဌာနနှငျ့မဆိုငျတာတှေ ပွောကွဆိုကွ။ဒီလိုလူတှမှော ကိုယျရထားသညျ့နရောနှငျ့ မိသားစု၊ ကိုယျစားပွုသညျ့ အဝနျးအဝိုငျးသိက်ခာဆိုတာ ထညျ့သှငျးစဉျးစားခွငျးမရှိတော့။
တဈလောက ရထားပျေါမှာ လူတဈယောကျ ဘေးဘီကိုဂရုမစိုကျဘဲ အျောကွီးဟဈကယျြ ဖုနျးဆကျသညျ။
"ဘယျသူ့ကို ဘယျလိုလုပျလိုကျ၊ ဘယျသူက ဘာပွောတာလဲ။ငါ့နာမညျပွောလိုကျ၊ ငါ့ဘာကောငျထငျသလဲ ငါ့ကို ရှာကဆရာတျောကွီးတောငျ ပွောရဲတာမဟုတျဘူး" စသဖွငျ့ ။
ကိုယျ့အိမျ ကိုယျ့ရုံးမဟုတျဘဲ လူကွပျသညျ့ရထားပျေါမှာဆိုတာကိုတောငျ သတိထားမိပုံမရ။ဒါမှမဟုတျ လူအထငျကွီးအောငျ ဟိတျဟနျထုတျပွောလသေလားမသိ။
ဆရာကနျတော့ပှဲတဈခုမှာ အငွိမျးစား ဆရာ၊ ဆရာမမြားကို ပွနျဆုံးမနသေညျ့ ဋ်ဌာနဆိုငျရာ လူကွီးတဈဦးကို တှဘေူ့းသညျ။တဈခါက မင်ျဂလာဆောငျတဈခုမှာ မင်ျဂလာဆုံးမစကားတကျပွောရငျး ကိုယျရညျသှေးတာလှနျလို့ ငပေါဖွဈသှားသညျ့ လူကွီးတဈဦးကိုလညျး တှရေ့ဘူးသညျ။ရပျထဲရှာထဲမှာ ဘယျသူနှငျမှမတညျ့သညျ့ ပငျစငျစားကွီးတှေ၊ တရားစခနျးသှားပွီး တရားပွသညျ့ ဆရာတျောနှငျ့ မတညျ့လို့ တရားစခနျး ဘယျတော့မှမဝငျတော့ဘူးဆိုသညျ့ ပငျစငျစားအရာရှိကွီးတှေ မကွာခဏကွုံဘူးသညျ။ဒါမြိုးတှေ ကြှနျတျောတို့ပတျဝနျးကငျြမှာ မကွာခဏတှနေို့ငျသညျ။ထိုသူက ဘေးလူတှအေထငျကွီးအောငျ ဟိတျထုတျကာပွောပမေယျ့ ကွားရတဲ့သူတှေ အထငျကွီးမကွီးတော့မသိ။ဒီလိုကွုံရကွားရတိုငျးက စိတျထဲ ငပေါကွီးဟု ချေါမိသညျ။
ဒီလိုလူတှေ ဒီလိုမြိုးတှေ လုပျငနျးခှငျထဲမှာ၊ ရပျထဲရှာထဲမှာ၊ ဌာနဆိုငျရာတှမှော၊ အာဏာပိုငျတှထေဲမှာ တှရေ့တိုငျး လူကွီးသူမတှပွေောလရှေိ့သညျ့ စကားတဈခှနျးကို သှားသတိရမိသညျ။
ထိုစကားက "အသကျကသာကွီးတာ၊ စိတျက ကလေးစိတျ" ဆိုသညျ့ စကားပငျ။
ကြှနျတျောတို့ပတျဝနျးကငျြမှာ ဒီလိုလူတှမြေားလှနျးလှသညျ။ကြှနျတျောတို့က လူကွီးဆိုပွီး ရိုသခေငျြသညျ။ကိုယျ့အထကျက အရာရှိဆိုပွီး လေးစားခငျြသညျ။ကိုယျတှကေို ကိုယျစားပွုသူဆိုပွီး အားကိုးခငျြသညျ။
ထိုသူတှကေ နူတျကသာမဟရငျ အားကိုးလေးစားစရာ။နူတျကလညျးဟကော တဈကယျကို ပေါကျတတျကရတှေ၊ပေါကျပနျးလေးဆယျတှေ ထငျရာမွငျရာတှေ ပွောကွဟောကွ။သူတို့ ကွောငျ့ ကြှနျတျောတို့မှာ ဘာလုပျလို့ လုပျရမယျမသိတော့။တဈကယျ့ကို စိတျပကျြစရာ။
လူမှုကှနျရကျပျေါတကျပွီး ပေါတောတောတှေ ပွောတာတှေ ရေးတာတှကေ ဖတျရကွားရတာ ရယျစရာကောငျးပမေယျ့ ဘယျသူကမှ ယုံကွညျကိုးစားမညျမဟုတျ။
ယခု ဒီလိုလူတှကေို အာဏာလကျရှိနှငျ့ အာဏာလကျမဲ့ဆိုသညျ့ နှဈဘကျလုံးမှာ မြားလာနပွေီ။
တဈကယျက ဟာသလုပျတာ ပေါတောတောပွောကာ ပွညျသူကိုဖြျောဖွတောက လူရှငျတျောတှအေလုပျဖွဈသညျ။နိုငျငံရေးသမားတှဆေိုတာ ပွညျသူတှအေားကိုးယုံစားဖို့ဆို ပွညျသူတှယေုံကွညျအောငျ လုပျပွရနျသာရှိပါသညျ။
ပွညျသူတှကေ ယခငျလူတှကေို ယူထားသညျ့နရောနှငျ့ လိုကျဖကျသညျ့ ရငျ့ကကျြမှုမရှိသဖွငျ့ မဲဖွငျ့ဖယျရှားခဲ့ခွငျးဖွဈသညျ။ထိုကျသငျ့သညျ့ တာဝနျယူမှုမရှိသဖွငျ့ ဖယျရှားခဲ့ခွငျးဖွဈသညျ။ရာထူးဌာနန်တရနှငျ့ ဆီလြျောသော စကားမြိုးမပွောဘဲ အရပျထဲ ခပျပကျြပကျြလူတှပွေောသလို စကားတှပွေောသဖွငျ့ ဖယျရှားခဲ့ခွငျးဖွဈသညျ။
ပွညျသူတှကေ ကိုယျ့ထကျ ဉာဏျပညာ၊ အကငျြ့သီလ၊ ကိုယျကငျြ့တရား၊ တာဝနျယူမှု တာဝနျခံမှု သာတဲ့သူတှမှေသာ ကိုယျ့ကိုအုပျခြုပျမညျ့သူတှအေဖွဈ လကျခံခငျြကွသညျ။အပွောသမားတှကေို မလိုခငျြ။အလုပျနှငျ့သကျသပွေသညျဆိုကာ ကိုယျ့အိတျထဲကောကျထညျ့သူမြားကိုလညျး မလိုခငျြ။အပွောနှငျ့ အလုပျ၊ တာဝနျယူမှုနှငျ့ တာဝနျခံမှု ဒါတှမြှေသညျ့ လူတှကေိုသာ လိုခငျြကွသညျ။နရောက ကွီးပွီး ကလေးစိတျသာသာ ပေါတောတောလူတှကေို မလိုခငျြ။လူကွီးဆိုသညျ့နရောနှငျ့ထိုကျတနျသညျ့ လူကွီးဆနျပွီး ရငျ့ကကျြသညျ့ အားကိုးရသညျ့သူမြိုးတှကေိုသာ ပွညျသူတှကေ မြှျောလငျ့ကွတာဖွဈသညျ။
ပွညျသူပေးသညျ့ အခှငျ့အာဏာ လိုခငျြပါသညျဆိုလြှငျ ပေါတောတော ပွောတာတှေ ရေးတာတှေ သငျ့၊ မသငျ့ ပွနျစဉျးစားသငျ့သညျ။
ကလေးစိတျမကုနျဘဲ ပွောခငျြရာပွောတဲ့သူတှကေို ခေါငျးပျေါအောငျ့အညျးပွီး တငျထားရတဲ့ခတျေက ကုနျခဲ့ပွီ။ပွညျသူတှဆေီက မဲကိုလိုခငျြသညျဆိုလြှငျ ကလေးဆနျသညျ့ ပေါပေါတောတော ပွောတာတှေ၊ လုပျတာတှေ မလုပျဖို့တော့လိုသညျ။ပွညျသူတှေ ယုံကွညျကိုးစားမှုရဖို့ဆို …. နရောနှငျ့လိုကျဖကျသညျ့ ရငျ့ကကျြမှုရှိဖို့ နှဈဖကျလုံးမှာ လိုပါသညျ…….။
ယနေ့ခေတ်လို မီဒီယာထွန်းကားမှုအားကောင်းသည့် ခေတ်ကာလမှာ facebook ပေါ်တက်ကာ ကလေးကလားရေးတတ်သည့် တစ်ချိန်က ရာထူးရာခံယူထားခဲ့သူတွေ၏ စာတွေကို မကြာခဏတွေ့မြင်ရသည်။ဒီလိုတွေမြင်ရတော့ တိုင်းပြည် ဘာကြောင့် အဖက်ဖက်ကနိမ့်ကျလာရသလဲဆိုသည်ကို သဘောပေါက်လာမိသည်။တစ်ခါတစ်လေ တော်တော်ယုတ်ယုတ်ညံ့ညံ့တွေရေးတာ တွေ့ရသည့်အခါ ဒီလိုလူမျိုးမှဟုတ်ပါလေစလို့ မသက်မသာဖြစ်မိသည်။ဒီလိုမရင့်ကျက်တဲ့သူတွေ ဘယ်လိုလုပ် ဒီနေရာတွေကိုတာဝန်ယူခဲ့ပါလိမ့်ဟု တွေးလည်းတွေးမိသည်။
တစ်ခါတစ်လေ ရေးသူကတော့ ဘယ်လိုနေမယ်မှန်းမသိ။သူများ share ရင်း အခန့်မသင့်လို့ ကိုယ့်ဆီ ဒီလိုမျိုး status တွေ တွေ့လာရသည်အခါ ရေးသူကတော့မသိ။တွေ့မြင်ဖတ်ရှုရသူ ကျွန်တော်တို့အဖို့ သူတို့အစား မျက်နှာပူလှသည်။
စကားဆိုသည်က ပြောပါများလာလျှင် စကားထဲကနေ ထိုသူ၏အကျင့်နှင့် ဓလေ့ဇရိုက်ကို ပြလာသည်။ငါပြောသမျှအမှန် ငါပြောသမျှအဟုတ်ဆိုသည့် အတ္တကြီးတာတွေ၊ သဘောထားမပြည့်တာတွေ၊ သဘောထားသေးသိမ်သူတွေ ပေါ်လာသည်။
ကိုယ်လိမ်ပြောတာကို တခြားသူမသိဘူးထင်ကာ အတင်းဇွတ်ယုံအောင်ပြောလေ ထိုသူမဟုတ်တာ ဘယ်လောက်လုပ်ခဲ့ပြီလဲဆိုတာကို လူတွေကပိုသိလာလေဆိုတာမျိုးတွေလည်း ဖြစ်လာတတ်သည်။တစ်ခါတစ်လေ ကိုယ်ယူထားသည့်နေရာနှင့် မတန်စွာပြောသည့် တာဝန်မဲ့စကားတွေ၊ ကလေးကလားပုံတွေ မီဒီယာပေါ်ထွက်လာသည့်အခါ တော်တော်ဦးနှောက်မရှိသည့်လူတွေအောက်မှာ နေခဲ့ရသည့်နှစ်တွေအတွက် ပြန်တွေးတိုင်း ဘုရားတမိသည်။
ဟိုယခင်ကတော့ ဘယ်လိုတွေဖြစ်နေသလဲမသိ။ဒီဘက်ခေတ် မီဒီယာတွေအားကောင်းလာသည့် ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်နောက်ပိုင်းမှာ ဒီလိုပေါတောတောစကားတွေ၊ သမိုင်းဝင် တာဝန်မဲ့စကားတွေ၊ ဒီလိုလက်လွတ်စပယ် တာဝန်မယူသည့်စကားတွေ ခဏခဏတွေ့လာရသည်။
တချို့က ကိုယ်ယူထားရသည့်နေရာနှင့် မလျော်ညီစွာ စကားတစ်ခွန်းကို တာဝန်မဲ့စွာပြောကြသည်။ကိုယ်ပြောသည့် စကားတစ်ခွန်းက ဘယ်လောက်ထိ တာသွားသည်ဆိုတာကိုလည်း မသိကြ။စကားတစ်ခွန်းနောက်မှာ တာဝန်ခံမှု တာဝန်ယူမှု ရှိရမည်ဆိုတာကို သိပုံမရ။
တချို့က ငါက ဘာကောင်ဖြစ်နေပြီဆိုပြီး ငါ့စကားနွားရဆိုသလို ပြောချင်တာတွေ ပြောကြသလို ပြောပြီး လုပ်ချင်မှလည်း လုပ်ကြသည်။တချို့ကတော့ ကလေးများသဖွယ် ငါနိုင်လျှင်ပြီးရော အဓိပ္ပါယ်မရှိတာတွေ နေရာဌာနနှင့်မဆိုင်တာတွေ ပြောကြဆိုကြ။ဒီလိုလူတွေမှာ ကိုယ်ရထားသည့်နေရာနှင့် မိသားစု၊ ကိုယ်စားပြုသည့် အဝန်းအဝိုင်းသိက္ခာဆိုတာ ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းမရှိတော့။
တစ်လောက ရထားပေါ်မှာ လူတစ်ယောက် ဘေးဘီကိုဂရုမစိုက်ဘဲ အော်ကြီးဟစ်ကျယ် ဖုန်းဆက်သည်။
"ဘယ်သူ့ကို ဘယ်လိုလုပ်လိုက်၊ ဘယ်သူက ဘာပြောတာလဲ။ငါ့နာမည်ပြောလိုက်၊ ငါ့ဘာကောင်ထင်သလဲ ငါ့ကို ရွာကဆရာတော်ကြီးတောင် ပြောရဲတာမဟုတ်ဘူး" စသဖြင့် ။
ကိုယ့်အိမ် ကိုယ့်ရုံးမဟုတ်ဘဲ လူကြပ်သည့်ရထားပေါ်မှာဆိုတာကိုတောင် သတိထားမိပုံမရ။ဒါမှမဟုတ် လူအထင်ကြီးအောင် ဟိတ်ဟန်ထုတ်ပြောလေသလားမသိ။
ဆရာကန်တော့ပွဲတစ်ခုမှာ အငြိမ်းစား ဆရာ၊ ဆရာမများကို ပြန်ဆုံးမနေသည့် ဋ္ဌာနဆိုင်ရာ လူကြီးတစ်ဦးကို တွေ့ဘူးသည်။တစ်ခါက မင်္ဂလာဆောင်တစ်ခုမှာ မင်္ဂလာဆုံးမစကားတက်ပြောရင်း ကိုယ်ရည်သွေးတာလွန်လို့ ငပေါဖြစ်သွားသည့် လူကြီးတစ်ဦးကိုလည်း တွေ့ရဘူးသည်။ရပ်ထဲရွာထဲမှာ ဘယ်သူနှင်မှမတည့်သည့် ပင်စင်စားကြီးတွေ၊ တရားစခန်းသွားပြီး တရားပြသည့် ဆရာတော်နှင့် မတည့်လို့ တရားစခန်း ဘယ်တော့မှမဝင်တော့ဘူးဆိုသည့် ပင်စင်စားအရာရှိကြီးတွေ မကြာခဏကြုံဘူးသည်။ဒါမျိုးတွေ ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ မကြာခဏတွေ့နိုင်သည်။ထိုသူက ဘေးလူတွေအထင်ကြီးအောင် ဟိတ်ထုတ်ကာပြောပေမယ့် ကြားရတဲ့သူတွေ အထင်ကြီးမကြီးတော့မသိ။ဒီလိုကြုံရကြားရတိုင်းက စိတ်ထဲ ငပေါကြီးဟု ခေါ်မိသည်။
ဒီလိုလူတွေ ဒီလိုမျိုးတွေ လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာ၊ ရပ်ထဲရွာထဲမှာ၊ ဌာနဆိုင်ရာတွေမှာ၊ အာဏာပိုင်တွေထဲမှာ တွေ့ရတိုင်း လူကြီးသူမတွေပြောလေ့ရှိသည့် စကားတစ်ခွန်းကို သွားသတိရမိသည်။
ထိုစကားက "အသက်ကသာကြီးတာ၊ စိတ်က ကလေးစိတ်" ဆိုသည့် စကားပင်။
ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဒီလိုလူတွေများလွန်းလှသည်။ကျွန်တော်တို့က လူကြီးဆိုပြီး ရိုသေချင်သည်။ကိုယ့်အထက်က အရာရှိဆိုပြီး လေးစားချင်သည်။ကိုယ်တွေကို ကိုယ်စားပြုသူဆိုပြီး အားကိုးချင်သည်။
ထိုသူတွေက နူတ်ကသာမဟရင် အားကိုးလေးစားစရာ။နူတ်ကလည်းဟကော တစ်ကယ်ကို ပေါက်တတ်ကရတွေ၊ပေါက်ပန်းလေးဆယ်တွေ ထင်ရာမြင်ရာတွေ ပြောကြဟောကြ။သူတို့ ကြောင့် ကျွန်တော်တို့မှာ ဘာလုပ်လို့ လုပ်ရမယ်မသိတော့။တစ်ကယ့်ကို စိတ်ပျက်စရာ။
လူမှုကွန်ရက်ပေါ်တက်ပြီး ပေါတောတောတွေ ပြောတာတွေ ရေးတာတွေက ဖတ်ရကြားရတာ ရယ်စရာကောင်းပေမယ့် ဘယ်သူကမှ ယုံကြည်ကိုးစားမည်မဟုတ်။
ယခု ဒီလိုလူတွေကို အာဏာလက်ရှိနှင့် အာဏာလက်မဲ့ဆိုသည့် နှစ်ဘက်လုံးမှာ များလာနေပြီ။
တစ်ကယ်က ဟာသလုပ်တာ ပေါတောတောပြောကာ ပြည်သူကိုဖျော်ဖြေတာက လူရွှင်တော်တွေအလုပ်ဖြစ်သည်။နိုင်ငံရေးသမားတွေဆိုတာ ပြည်သူတွေအားကိုးယုံစားဖို့ဆို ပြည်သူတွေယုံကြည်အောင် လုပ်ပြရန်သာရှိပါသည်။
ပြည်သူတွေက ယခင်လူတွေကို ယူထားသည့်နေရာနှင့် လိုက်ဖက်သည့် ရင့်ကျက်မှုမရှိသဖြင့် မဲဖြင့်ဖယ်ရှားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ထိုက်သင့်သည့် တာဝန်ယူမှုမရှိသဖြင့် ဖယ်ရှားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ရာထူးဌာနန္တရနှင့် ဆီလျော်သော စကားမျိုးမပြောဘဲ အရပ်ထဲ ခပ်ပျက်ပျက်လူတွေပြောသလို စကားတွေပြောသဖြင့် ဖယ်ရှားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ပြည်သူတွေက ကိုယ့်ထက် ဉာဏ်ပညာ၊ အကျင့်သီလ၊ ကိုယ်ကျင့်တရား၊ တာဝန်ယူမှု တာဝန်ခံမှု သာတဲ့သူတွေမှသာ ကိုယ့်ကိုအုပ်ချုပ်မည့်သူတွေအဖြစ် လက်ခံချင်ကြသည်။အပြောသမားတွေကို မလိုချင်။အလုပ်နှင့်သက်သေပြသည်ဆိုကာ ကိုယ့်အိတ်ထဲကောက်ထည့်သူများကိုလည်း မလိုချင်။အပြောနှင့် အလုပ်၊ တာဝန်ယူမှုနှင့် တာဝန်ခံမှု ဒါတွေမျှသည့် လူတွေကိုသာ လိုချင်ကြသည်။နေရာက ကြီးပြီး ကလေးစိတ်သာသာ ပေါတောတောလူတွေကို မလိုချင်။လူကြီးဆိုသည့်နေရာနှင့်ထိုက်တန်သည့် လူကြီးဆန်ပြီး ရင့်ကျက်သည့် အားကိုးရသည့်သူမျိုးတွေကိုသာ ပြည်သူတွေက မျှော်လင့်ကြတာဖြစ်သည်။
ပြည်သူပေးသည့် အခွင့်အာဏာ လိုချင်ပါသည်ဆိုလျှင် ပေါတောတော ပြောတာတွေ ရေးတာတွေ သင့်၊ မသင့် ပြန်စဉ်းစားသင့်သည်။
ကလေးစိတ်မကုန်ဘဲ ပြောချင်ရာပြောတဲ့သူတွေကို ခေါင်းပေါ်အောင့်အည်းပြီး တင်ထားရတဲ့ခေတ်က ကုန်ခဲ့ပြီ။ပြည်သူတွေဆီက မဲကိုလိုချင်သည်ဆိုလျှင် ကလေးဆန်သည့် ပေါပေါတောတော ပြောတာတွေ၊ လုပ်တာတွေ မလုပ်ဖို့တော့လိုသည်။ပြည်သူတွေ ယုံကြည်ကိုးစားမှုရဖို့ဆို …. နေရာနှင့်လိုက်ဖက်သည့် ရင့်ကျက်မှုရှိဖို့ နှစ်ဖက်လုံးမှာ လိုပါသည်…….။